समाजसेवी तथा युवा व्यवसायी सन्जय लामाकाे “मनकारी मन सँगै, मन छुने कथा” – Digital Khabar
समाजसेवी तथा युवा व्यवसायी सन्जय लामाकाे “मनकारी मन सँगै, मन छुने कथा”
By जीवन शर्मा Last updated Apr 23, 2021
०२ बैशाख, काठमाडौं । ‘समाजसेवा’ शब्द अत्यन्तै “लोकप्रिय” र हरेक नागरिकले आफूलाई ‘प्रतिष्ठित’ साबित गर्ने फर्मुलाको रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।
नयाँ बर्ष २०७८ को अवसरमा नयाँ जीवन नेपाललाई समाजसेवी तथा सिन्धुपाल्चोकका युवा नेता सन्जय लामाले एक लाख पन्ध्र हजार सहयोग गर्नु भयाे। समाजसेवी तथा युवा व्यवसायी एवम् नेपाल तरुण दल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नं २ का महाधिवेसन प्रतीनिधि युवा नेता सन्जय लामाले नयाँ जीवन नेपाल सँस्थाका बालबालिकाको लागि ट्याकसुट, डाईपर खरिद तथा नयाँ वर्षको पावन अवसरमा बालबालिकाको लागी मिष्ठान्न भोजन एवम् बालबालिकालाई मनोरन्जन का लागि आर्थीक सहयोग पनि गर्नु भयाे ।
हामी सबैलाई समाजमा केही न केही काम गरेर नाम राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा पक्कै पनि लाग्छ । हामीलाई समाजमा केही देखिने काम गर्न, दुःखीलाई सहयोग गर्न होस् या समाजमा भैपरी आउने सबै खालको काममा आफ्नो सहभागिता रहोस् भन्ने लाग्न सक्छ । यो मानवीय स्वभाव पनि हो । यसका लागि हामी कति निःस्वार्थ रुपमा लागेका छौँ ? हामीले कति उदाहरणीय समाजसेवा गरेका छौं ? फलको आशा गरी वा नगरी आफूलाई कस्तो ‘समाजसेवा’ मा समर्पण गरेका छौं भन्ने कुराले महत्व राखेको हुन्छ ।
अहिले २१ औं शताब्दी चलिरहेको छ । जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ । विज्ञानले शिक्षा र सूचना व्यापक बनाइरहेको छ भन्ने कुराको प्रचारप्रसार भैरहेको छ । मानिसहरुले भौतिक निर्माण र सुखसुविधाहरु बिस्तार गरिरहेका छन्, भोगिरहेका छन् ।
विश्व साँघुरो हुँदैछ, वरपरका मात्रै होइन हामी घरभित्रै बसेर विश्व पढ्न र देख्न सक्ने भएका छौ । यतिबेला हामीले देशभित्र मात्रै होइन, विश्वमा नै समाजका लागि उच्च योगदान पुर्याउनेहरुको काम नियाल्न र ती केही दशक पहिलेका सामाजिक अभ्यासहरुसँग तुलना गर्न पनि सक्छौं । हामी पढेर, देखेर, सुनेर र हेरेर त्यस्ता थुप्रै सामाजिक कार्यको अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ । मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकेकाे छुः सन्जय लामा
यी सबै कार्यहरु गर्दा हाम्रो निःस्वार्थपना कत्तिको छ ? यो कुरा बुझ्न आज दिनानुदिन बिपद्का घडीहरु हाम्रो सामु आइरहेका बेला तुलना गर्न पनि सकिन्छ ।
समाजसेवा के हो?
प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वको सूचक र आधार के कसरी निर्धारित गर्ने?
हिजो गाउँमा बस्ती पातलो थियो । एक अर्कालाई परेको सुख-दुःखमा सरिक रहन आफन्त र छिमेकीहरु मात्र सिमित रहन्थे । ‘मर्दाका मलामी र पर्दाका जन्ती’ । सामुदायिक र कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत निर्माणका कार्यमा आपसमा श्रमदान गर्नुको विकल्प थिएन । छिमेकको ठूलो गह्रोमा रोपाईं पर्दा आफन्तहरु सबै पुगेका हुन्थे । दाईं हाल्दा छिमेकीहरु मिलेर टौवा खडा हुन्थ्यो । घर छाउने कामको लागि आफन्तहरुले कहिल्यै ज्याला लिएनन् । दशैँ आउनुभन्दा पहिला मिलेर बाटो खान्थे । गाउँ वरिपरिको झाडी मिलेरै सफा गर्दथे । आपत पर्दा सबै मिलेर छलफल गर्दथे । नियम बनाउँथे, इमान्दारीसाथ त्यसलाई मिलेरै पालना गर्दथे । नियम, कानुन भन्दा पनि धर्ममा बढी विश्वास थियो । राम्रो गरे धर्म र नराम्रो गरे पाप लाग्छ भन्ने बिश्वासले एकअर्कामा सहयोग र सद्भावका साथ नियम पालना गरेको सामाजिक पद्धति हामीमध्ये धेरैले देखे, भोगेका पनि छौं ।
हामी हाम्रो समाज समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ । क्रमगत रुपमा भौतिक विकासको महसुस भएको छ, तर हामीले सबैखालको विकास खोजीरहँदा कतै मानवीय संवेदनशीलता र मान्छेभित्रको मानवीयता हराएको त होइन ? मान्छेको भिड ठूलो छ । धेरैसँग सम्पर्क, समन्वय बढ्दै छ । केही अप्ठ्यारो पर्दा घरमा ठुलै भिड पनि देखिन्छ । कतै केही पर्दा थुप्रै सहानुभूति देखाएको जस्तो पनि देखिन्छ । ‘विवाहमा जन्त र मर्दा मलामी’ जस्ता कुरालाई पनि आज समाजसेवाको ठूलै ‘उदाहारण’को रुपमा हिसाब गर्न थालिएको छ ।
हाम्रो पृष्ठभूमि र परम्परालाई हेर्दा साँच्चै नै के यो समाजसेवा हो त ?
अथवा यो मानवीय धर्म, कर्तव्य र जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ?
जसले हामीलाई सामाजिक नाता कायम राखिराख्न, सामाजिक संरचनालाई सबल राखिरहन, सामाजिक प्राणी भएको नाताले एउटा असल नागरिकको रुपमा आफूलाई सावित गरिरहन र मानवीय संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा टिकाई रहने समुदायका रुपमा चिनिएका हामी नेपालीको विशेषता कायम राखिरहोस् ।
हाम्रो मानवीय कर्तव्य पूरा भयो ?
यसले नै हो त हाम्रो सामाजिक संरचना थाम्ने ?
यतिले नै हाम्रा सामाजिक अगुवाका हतियारहरु धारिलो बनाइराख्न पुग्यो त ?
मलाई यस्ता कुराहरु यहाँ यसकारण जोड्न मन लाग्यो कि आजभोलि समाजसेवामार्फत थुप्रै र अत्यन्तै राम्रा प्रयास र उपलब्धिहरु भएको, देख्न, सुन्न र अनुभव समेत गर्न पाएका छौँ, तर हामी समाजसेवा भनेर दौडधुप गरिरहँदा हाम्रा पुर्खाहरुले निरन्तर अभ्यास गरिरहेका राम्रा र उदाहरणीय समाजसेवाका नमूनाहरु भुल्नाले मानवीय संवेदनशीलतामा ह्रास आइरहेको त छैन ? आफ्नो मानवीय कर्तव्यका रुपमा योगदान गरेको हाम्रो समयको हिसाब पूराका पूरा गणितीय रुपमा नै फिर्ता आउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीलाई ग्रस्त बनाएको त होइन ?
मैले बुझेको समजसेवाको मान्यता त निःशुल्क र निःशर्त हुनु पर्छ भन्ने पो हो त । अनुहार देखाउने, हाजिर गर्ने, भाषण गर्ने, फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेर समाजसेवाको स्टाटस लेख्ने होडबाजीलाइ कुन हदसम्म समाजसेवाको मान्यता दिने वा निरुत्साहित गर्ने ? अथवा समयानुकुल आएका अवधारणाहरुमा समीक्षा गरेर परिमार्जित विचारहरुलाई परिभाषित गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छलफल चलाउँदै जानुले नाम चलेको हाम्रो सबल सामाजिक संरचनालाई कायम राख्न स्वार्थभन्दा माथि उठेका संस्थाहरुले एउटा अभियानका लागि पहल गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ । सबै मिलेर स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्छौं भन्ने मूल्य र मान्यतालाई प्रमाणित गरौँ ।
सन्जय लामा भन्नु हुन्छ “सेवा नै धर्म हो” र धर्म गर्नु कुनै मठ मन्दिर जानु पर्दैन यदी कोही अप्ठेरो अथवा दुःखको परिस्थितिमा परेको बेला उस्लाई सहयोग गर्नु पाउनु पनि धर्म हो। मिडिया मार्फत के भन्नु चाहन्छु भने, हामी मानब भएर जन्मिए पछी एक आपसमा मर्दा-पर्द सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । एक अर्कालाई मर्दा-पर्दा सहयोग गर्नु नै मानविय धर्म हो ।